မျိုးသာကီအတွက် ရဲဝံ့ ဒို့ အာဇာနည်: သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့ အလှူဒါန သို့ ကြွရောက်ကြပါကုန်။ “၂၀၁၀ ကမ္ဘာ့ လူအခွင့်အရေး၏ တိုက်ပွဲနှစ်” မြန်မာ့သွေးအနီရောင် မညစ်စေနဲ့ ။ စစ်ကျွန်ဘ၀လွှတ်မြောက်ကြဖို့တော်လှန်ှရေးသို့့ အသင့်ပြင်
သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့ အလှူဒါန သို့ ကြွရောက်ကြပါကုန်။
U Ayethaka show details 3:10 AM (23 minutes ago)
ဗြဟ္မ၀ိဟာရ အဇူဇာကျောင်း-ရွှေတိဂုံစေတီတော် အထက်ဌာပနာတိုက် သွင်းလှူပူဇော်ပွဲသို့
The long-awaited pagoda is soon to becomeareality at Brahma Vihara, Azusa Monastery.
In accordance with ancient traditions,atreasure trove will be enshrined within the pagoda.
Buddhist devotees are invited to participate in the creation of this treasure trove.
Pls. Click the links
၁။ စေတီတော် အထက်ဌာပနာသွင်းပွဲ ဖိတ်စာ
၂။ အဇူဇာကျောင်း တရားပွဲဖိတ်စာ
ကုလသမဂ္ဂမှ ကြီးမှူး၍ မြတ်စွာဘုရားဖြစ်တော်မူသည့် (၂၆၀၀)ပြည့် အထိမ်းအမှတ်ပူဇော်ပွဲကို May 16, 2011 နေ့က ကျင်းပခဲ့ပါသည်။
၁။ ကုလသမဂ္ဂအနီးတွင် ဆွမ်းလောင်းပွဲ
၂။ ကုလသမဂ္ဂ မိန်းခမ်းမတွင် နံနက်ပိုင်း အစည်းအဝေး (8:00 AM to 10:oo AM)
၃။ ကုလသမဂ္ဂ မိန်းခမ်းမတွင် နေ့လည်ပိုင်း အစည်းအဝေး (3;00 PM to 6:00Pm)
၄။ သီရိလင်္ကာကျောင်းမှာ တန်းစီလည့်လည် ပူဇော်ပွဲ
(သို့အဟုတ်) အောက်ပါ Web Site မှာ ဓါတ်ပုံအားလုံးကို ကြည့်နိုင်ပါသည်။
Sayardaw Ashin Ayethaka
Brahma Vihara(Azusa Monastery)
1790 & 1830 Ranch Road
Azusa, California 91702, USA
Tel (626)969-2118 Fax (626) 969-5959
Posted by ဒေါင်းတမာန် at 12:04 AM